SelectaCategory CreditShare New Prepaid Plan (New) Unlimited Mobile Internet (New) Unlimited Power Prepaid Plan Unlimited Mobile Internet Giler Unlimited GX30 & GX12 Prepaid GX12/ GX30 – அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் प्रिपेड GX12/ GX30 – धेरै सोधिने प्रश्नहरू Paket Unlimited Funz Prepaid – Pertanyaan Umum எல்லையற்ற Funz Prepaid திட்டம் – அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் Unlimited Funz Prepaid Plan - धेरै सोधिने प्रश्नहरू EPIKKK Video3 Giler Unlimited GX38 Data Booster5CreditSOS Service CreditShare General Prepaid Old U Prepaid Plan Power Prepaid Pack Prepaid Top Up Voice Plans Prepaid Account Validity Extension Service Giler Talk GT30 Unlimited FUNZ Prepaid Plan GX12/ GX30 Prabayar – Pertanyaan Umum ေငြႀကိဳေပး GX12/ GX30 - ေမးေလ့႐ွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား Unlimited Funz Prepaid Plan - ေမးေလ့ေမးထ႐ွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား Prepaid GX12/ GX30 – সাধারণ প্রশ্নাবলি Unlimited Funz Prepaid Plan - সাধারণ প্রশ্নাবলি پریپیڈ GX12/ GX30 – کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات Unlimited Funz Prepaid پلان – کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات Kempen Pulangan Tunai 100% Pelan Prabayar melalui Pembayaran Alternatif CreditShare - BM CreditShare - CH
नयाँ Unlimited Funz Plan सब्सक्राइब गर्न को-को योग्य छन् ?
25 जुलाई 2019 बाट लागू हुने गरी U Mobile का सबै नयाँ सब्सक्राइबरहरूलाई यो नयाँ प्लानमा स्वत: एक्टिभेट गरिनेछ ।
वर्तमान प्लान (Unlimited Power, Power Prepaid, New U Prepaid वा U Prepaid plan) मा रहेका सब्सक्राइबरहरू जो नयाँ Unlimited Funz Plan मा अपग्रेड हुन चाहन्छन्, तपाईंले UMB मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ ।
Unlimited Funz Pack मा के-के हुन्छ ?
Unlimited Funz Pack मा निम्न कुराहरू पहिल्यै लोड रहेको हुन्छ:
नि:शुल्क 200MB हाइ स्पिड इन्टरनेट
5 दिनको वैधता अवधि
तपाईंको मुख्य क्रेडिट ब्यालेन्सबाट RM1 काटिएपछि बाँकी दिनभरिका लागि नि:शुल्क अन-नेट कलहरू
मैले नि:शुल्क 200MB हाइ-स्पिड इन्टरनेटको मजा कसरी लिन पाउँछु ?
तपाईंको Unlimited Funz Plan एक्टिभेट भएपश्चात नि:शुल्क 200MB हाइ स्पिड इन्टरनेट स्वत: दिइनेछ । यो5दिनका लागि मान्य हुन्छ ।
मैले नि:शुल्क अन-नेट कलहरूको मजा कसरी लिन पाउँछु ?
Unlimited Funz Plan एक्टिभेट भएपश्चात तपाईंले हरेक दिन तपाईंको मुख्य क्रेडिट ब्यालेन्सबाट RM1 काटेपछि नि:शुल्क U Mobile - U Mobile कलहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ ।
मैले तपाईको एउटा प्रोमोसनबाट नि:शुल्क क्रेडिट प्राप्त गरेको छु, के नि:शुल्क अन-नेट कलहरू नि:शुल्क क्रेडिटबाट घट्नेछ ?
हो, नि:शुल्क अन-नेट कलहरू नि:शुल्क क्रेडिटबाट घटाइनेछ । यदि तपाईं नि:शुल्क अन-नेट कलहरूका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने अन-नेट कलहरूको कोटा अन्य प्रोमोसनहरू वा सर्भिसबाट प्राप्त भएका नि:शुल्क मिनेटहरू वा क्रेडिटहरूबाट उपयोग हुनेछन् र त्यसपछि नि:शुल्क अन-नेट कलहरूबाट । उदाहरणका लागि, यदि तपाईंसँग टप अप प्रोमोसनबाट प्राप्त RM0.50 को नि:शुल्क क्रेडिट छ भने नि:शुल्क अन-नेट कलहरू पहिला नि:शुल्क क्रेडिटहरूबाट र त्यसपछि नि:शुल्क अन-नेट कलहरूबाट घट्नेछ ।
Unlimited Funz Plan को लोकल कल तथा SMS को दरहरू कति छ ?
लोकल कलमा 15 सेन/30 सेकेण्ड शुल्क लाग्छ भने हरेक SMS मा 12 सेन शुल्क लाग्छ । कलहरूका लागि 30 सेकेण्डका दरले शुल्क लगाइन्छ ।
म कसरी एक्टिभ रहन सक्छु ?
एक्टिभ हुनका लागि आफ्नो अकाउन्ट टप अप गरे मात्र हुन्छ । हरेक RM1 को टप अप 1 दिनको एक्टिभ अवधि बराबर हो । कुनै पनि एक समयमा अधिकतम एक्टिभ अवधि 365 दिन हुन्छ ।
Unlimited Funz Plan को वैधता अवधि कति हुन्छ ?
Unlimited Funz Plan5दिनको एक्टिभ अवधि तथा 60 दिनको निष्क्रिय अवधिका साथ आउँछ ।
के नि:शुल्क कलहरूको प्रोमोसन भिडियो कलहरूमा लागू हुन्छ ?
हुँदैन, नि:शुल्क कलहरू U Mobile नेटवर्कभित्र लोकल भ्वाइस कलहरूमा मात्र लागू हुन्छन् ।
के मैले गर्न सक्ने नि:शुल्क कलहरूको सङ्ख्यामा कुनै सीमा छ ? के कुनै 'फ्रेन्डस एण्ड फ्यामिली' सेटिङ्स आवश्यक पर्छ ?
पर्दैन, तपाईं सबै U Mobile नम्बरहरूमा कलहरू गर्न सक्नुहुन्छ ।